အင်္ဂလိပ်စာ ဘယ်အချိန်မှာ တက်မှာလဲ။ဘယ်ထိလဲ။ လေ့လာမှာက ပညာသည်အဆင့်အထိလား။ပညာရှင်အဆင့်လား။ - Myanmar Network
အင်္ဂလိပ်စာ ဘယ်အချိန်မှာ တက်မှာလဲ။ဘယ်ထိလဲ။ လေ့လာမှာက ပညာသည်အဆင့်အထိလား။ပညာရှင်အဆင့်လား။
Posted by minminsoeadb on March 24, 2012 at 22:55 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေဆုံရင် အမြဲတမ်းပြောဖြစ်တဲ့ စကားတခွန်းရှိပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာ ဘယ်အချိန်မှာ တက်မှာလဲ။တက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပေါ့။နဲနဲလေး မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်မှ လွဲ၍ ကျန်တဲ့လူများက အင်္ဂလိပ်စာကို လက်တွေ့အသုံးချပြီး ငွေရှာနေတဲ့ လူတွေပါ။ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ စာတက်ပေတက်လို့ သက်မှတ်ခံရတဲ့ လူတွေပေါ့ဗျာ။မန္တလေးအဆင့်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမြင်အရ အင်္ဂလိပ်စာကို မွေးစားစကားလုံးတွေလို စိတ်ထဲမှာ ထင်လာတဲ့အချိန် တက်တာပဲလို့ ပြောချုင်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာက အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတလုံးကို မြင်လိုက်ရတဲ့။ကြားလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ ဘာသာပြန်စရာမလိုပဲ စိတ်ထဲမှာ အလိုလိုနေရင်းသိသွားတာမျိုး။စကားတခွန်းပြောချင်တဲ့ အခါ သဒ္ဒါနည်းအရ စိတ်ထဲမှာ စာစီမနေပဲ လွှတ်ခနဲပြောနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်စာကို အဆင့်မီမီ။လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။လက်တွေ့အသုံးချဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ စာအုပ်တွေမှာ ဖတ်ရတဲ့ အင်္ဂလ်ိပ်အသံထွက်ဘယ်လိုမှ မှန်တာ။ဘယ်လိုအီဒီယမ်တွေသုံးမှ အဆင့်မီတာစတဲ့ စာပေသမားတွေ။တက်မှန်းသိကြောင်း လူတွေကို ကြွားချင်ပြီး သိပ်မသိသေးတဲ့လူတွေကို ခြောက်ချင်တဲ့ ဆရာ့။ဆရာကြိးတွေသက်မှတ်တဲ့ အဆင့်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။လုပ်ငန်းခွင်မှာ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ပက်သက်ရတဲ့ ကိစ္စတွေ။ဘာသာမဖြစ်မနေပြန်ရတဲ့ အလုပ်တွေမှာ အဆင့်မီမီလုပ်နိုင်တဲ့ အဆင့်လောက်ကို ပြောတာပါ။ မေးစရာမေးခွန်းက မွေးစားစကားလုံးတွေလိုဘာသာပြန်စရာမလိုပဲ တန်းသိတယ်ဆိုတာ ဘာလဲပေါ့။? ဟုတ်ကဲ့။ ဖုန်း လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာလို့ ဘာသာမပြန်မိပဲ စိတ်ထဲမှာ တန်းသိတာမျိုး။ဒေါက်တာလို့ ကြားလိုက်တာနဲ့ ဆရာဝန်လို့ ဘာသာပြန်စရာမလိုပဲ တန်းသိတာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်းအမြင်ကတော့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးအတွဲတွေကို ဗမာလိုဘာသာမပြန်ပဲ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ဘာသာပြန်စေချင်ပါတယ်။ဇာတ်ကားတွေကြည့်ရင်။သီချင်းတွေနားထောင်ရင် ပြောလိုက်တဲ့ စကားတခွန်းရဲ့ ရှေ့နောက်အစီအစဉ်ကို ကြည့်ပြီး နားလည်အောင်လုပ်။ပြီးရင် အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးကြုံလာခဲ့ရင်။သို့ ကြုံအောင်ဖန်တီးပြီး ကိုယ်တိုင်ပြန်သုံးကြည့်။ဒါဆို ကြာလာရင် အဲဒီစကားလုံးအတွဲလေးတွေက ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကာုးလုံးဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော့်အဖို့ကတော့ ငါးနှစ်လောက်ကြာပါတယ်။ဥာဏ်မကောင်းတာလည်း ပါတာပေါ့။မိတ်ဆွေများကတော့ ကျွန်တော့်ထက်ဥာဏ်ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကို အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ဖို့ကတော့ အောက်စဖို့အဘိဓာန်လိုပါတယ်။ကြိုးစားပြီး ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် သုံးလလောက်နေရင် အဆင်ပြေလာမှာပါ။ချက်ခြင်းကြိးကတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော့်တုန်းကတော့ ဇာတ်ကားကြည့်။မသိတဲ့စကားလုံးပါရင် ခဏရပ်။အဘိဓာန်ထဲမှာ လိုက်ရှာ။ပြီးမှ အဲဒီစကားလုံးကို သုံးပြီး ဝါကျတွေဆယ်ကြောင်းလောက်ဖွဲ့ကြည့်။သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဲဒီလို ငါးနှစ်လောက်လုပ်ကြည့်တာ အဆင်ပြေပါတယ်။တခုပါပဲ။စိတ်မရှည်လို့တော့ မရပါဘူး။ပြီးတော့ တော်တော်လေး အားထုတ်ရပါတယ်။အစပိုင်းမှာ ငါ ဒီလောက်စာလုံးတွေအများကြိး မှတ်မှ မှတ်နိုင်ပါ့မလားလို့ ထင်တက်ပါတယ်။မပူပါနဲ့။လုပ်ငန်းခွင်မှာ။စာတမ်းဖတ်ပွဲတွေမှာ သုံးတာက လူအများဆုံးသိတဲ့ စကားလုံးတွေပါပဲ။ ဥပမာ..assassinate ဆိုရင် တော်တော်များများ မသိပါဘူး။အဲဒီအစား kill လို့သုံးသွားတာပါပဲ။ပညာပြချင်တဲ့ လူတွေလောက်ပဲ သုံးကြပါတယ်။ဒါမျိုးက ရှားပါတယ်။ ပြောချင်တာကတော့ အင်္ဂလိပ်စာက သင်ပေးလို့မရပါဘူး။နည်းလမ်းပဲပြလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော် မိတ်ဆက်စာတွေဖတ်ကြည့်တိုင်း နဲနဲတော့ မကြိုက်ဘူး။သူတို့ကပဲ နှိမ့်ချပြောသလားတော့ မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ "ကျွန်တော်ကတော့ အခုမှ အသစ်လေးပါ။သင်ပေးကြပါဦး" ဒါမျိုးတွေတော်တော်ဖတ်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်သူမှတော့ ကိုယ်တိုင်မကြိုးစားပဲနဲ့ မတက်ဘူးလို့ပဲ ပြောပါရစေ။ တခုပဲရှိတာက ကျွန်တော့်အသက်ဆယ့်ခြောက်နှစ်အရွယ်က အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာခဲ့ရာမှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အမှားတွေကိုတော့ ပြောပြနိုင်ပါတယ်။အခု အသက် နှစ်ဆယ့်ခြောက်အရွယ်မှာ နဲနဲသိလာခဲ့တဲ့ အမှန်တွေတော့ ပြောချင်ပါတယ်။တက်လို့မဟုတ်ပါဘူး။မျှဝေပေးတာပါ။ဆယ်တန်းအောင်စဉ်က ဘာမှ မသိပဲ သဒ္ဒါစာအုပ်အဟောင်းကြီးတွေ။ဘုန်းကြီးတွေရေးတဲ့ သဒ္ဒါစာအုပ်အထူကြီးတွေဖတ်ပြီး အဲဒီထဲမှာ ငါးနှစ်လောက်ကြာဖူးပါတယ်။ present perfect continous အစရှိတဲ့ လူသုံးနဲတဲ့ verb forms တွေ။ do နဲ့ make ရဲ့ ခြားနားတဲ့အသုံးတွေစတဲ့ အပြင်မှာ သိပ်အရေးမကြိးတဲ့ သဒ္ဒါအပိုင်းတွေမှာ အချိန်အရမ်းကုန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။I love you လို့ ပြောလိုက်ရင် ပြီးနေတဲ့ ဟာကို I affectionate you လို့ပြောလိုက်ရင် ပိုများအထင်ကြီးမလားစတဲ့ အသုံးမဝင်တဲ့ အပိုင်းတွေကို အရမ်း အလေးအနက်လိုက်စားဖူးပါတယ်။ eight parts of speech ဆိုတာမှားတယ်။သဒ္ဒါမှာ functional နဲ့ semantical ဆိုတဲ့ နှစ်ပိုင်းပဲ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ကုလားကြီးနဲ့ အရာကြီးကို မတူပါဘူးလို့ ငြင်းနေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ သဒ္ဒါစာရေးဆရာကြိးများရဲ့ စာမူခရအောင် လျှောက်ငြင်းနေကြတဲ့ ကိစ္စတွေကို အဟုတ်မှတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖူးပါတယ်။အခု အပြင်မှာ လက်တွေ့သုံးကြည့်မှ။နဲနဲကြွားရရင် နိုင်ငံခြားကို နှစ်ခေါက်လောက်ရောက်ပြီးမှ။နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ဆယ်၇က်လောက် ခရီးအတူတူသွားဖူးမှ ။ဘာသာပြန်ပြီး ငွေရှာတဲ့ အလုပ်လုပ်ပြိးမှ။နိုင်ငံတကာ သတင်းစာတွေကို ဖတ်ကြည့်မိတော့မှပဲ ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေဟာ ဘာမှ အရေးမကြိးတဲ့ ကိစ္စတွေပါလားလို့ သိလိုက်ရပါတယ်။သူငယ်ချင်းများ။ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ မိတ်ဆွေများကို ကိုယ့်လို မမှားစေချင်တဲ့ စေတနာအရိုးခံနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။ပညာရှင်တွေကို စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့က ပညာသည်လိုင်းပါ။ပညာရှင်လိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီနှစ်ခု နားလည်အောင်ပြောရရင် ပညာရှင်ဆိုတာ ဘာသာရပ်တခုကို အတွင်းကျကျလိုက်စားပြီး အဲဒီဘာသာရပ်ထဲမှာပဲ ပျော်မွေ့နေပြီးတော့ အဲဒီဘာသာရပ်ကနေ ဘာအကျိုးအမြတ်မှ မမျှော်ကိုးပဲ ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်စားပြီး လိုက်စားတဲ့ လူလို့ ယူဆပါတယ်။ ပညာသည်ဆိုတာကတော့ ပညာရပ်တခုကို ဘယ်အဆင့်ထိ တက်မြောက်ရင် ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လိုအကျိုးရှိမယ်။ဘယ်လောက်အထိတက်ရင် ဘယ်လောက်အကျိုးရှိမယ်။မိမိပက်ဝန်းကျင်မှာ အသုံးဘယ်လောက်အထိ ဝင်တယ်ဆိုတာကို တွက်ချက်ပြီး ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်။ကိုယ့်အတွက် အသုံးမဝင်ရင် အဲဒါကို မလိုက်စားပါဘူး။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော့််အနေနဲ့ မိဘက ဘာအထောက်အပံ့မှ မပေးနိုင်တော့ ဒါကိုအသုံးချပြီး မိမိဘဝတက်လမ်းကို ရှာနေတာပါ။အခု ရည်ရွယ်တာကလည်း ကျွန်တော့်လို ဘဝတူသူငယ်ချင်းတွေကို ရည်ရွယ်ပြီး ပြောတာပါ။အင်္ဂလိပ်စာကို လှေကားတခုအနေနဲ့ အသုံးချပြီး ကိုယ့်ဘဝတက်လမ်းကို ရှာနေတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တူ မိတ်ဆွေများ။ စာအုပ်ကြော်ငြာတွေ။သုံးလပြတ် အတက်သင်မယ်ဆိုပြီး ဘွဲ့အမြီးအရှေည်ကြီးတွေနဲ့ ကြော်ငြာတက်တဲ့ ဆရာတွေရဲ့ လှိုင်းလုံးအောက်မှာ မျောသွားမှာ စိုးလို့ပါ။ ပညာရှင်မဟုတ်တဲ့အတွက် အမှားတွေကို ထောက်ပြနိုင်ပါတယ်။တခု ကြိုတောင်းပန်ချင်တာကတော့ မိတ်ဆွေများက ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောရင် ကျွန်တော်ကလည်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပါပဲ။ရိုင်းချင်ရင်လည်း မငြင်းပါဘူးဗျာ။မန္တလေးသားပဲ။ အမြဲတမ်းကြိုဆိုလျက်ပါ။ဟဲဟဲ. Like
Permalink Reply by htet wai tun on March 27, 2012 at 14:16
လမ်းညွန်ပေးထားတာ တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ရှင် တကယ်ကြိုက်ပါတယ် နောက်လဲရှင်းပြပေးပါဦး
Permalink Reply by khin thandar oo on March 27, 2012 at 19:32
Permalink Reply by minminsoeadb on March 28, 2012 at 13:34
yes,you are right in pointing out my mistake of using verb and adjective forms of affectionate. I madeamistake there but let me say i wrote that issue when i haveachat in main room and some of the friends regard English Grammar asavery important thing in studying and applying in their daily life and the another examples you explain here are also correct but i think your attitude in here is completely wrong as the aim of writing that discussion is to show the English beginners in order to make them understand the first step towards the ways of applying English in their daily life .The grammatical points you showed here are not also the advanced level in international level but in Myanmar, it is still regarded as intermediate level not the basic level and if you can't accept this argument, you should survey the exam old questions of the any universities.
but honestly, thank you for sharing your knowledge .I hope we can be friend in the future and discuss about English. My email is minminsoeadb@gmail.com and i would like to invite you to beafriend.
Permalink Reply by Gyit on March 28, 2012 at 8:06
မိတ်ဆွေများက ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောရင် ကျွန်တော်ကလည်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပါပဲ။ရိုင်းချင်ရင်လည်း မငြင်းပါဘူးဗျာ။မန္တလေးသားပဲ။ အမြဲတမ်းကြိုဆိုလျက်ပါ။ဟဲဟဲ. Like :PPPP
Permalink Reply by noenoe on March 28, 2012 at 21:30
Thanks . Fighting :D
Permalink Reply by thwe thwe phyo on March 29, 2012 at 12:01
Permalink Reply by Su Thandar Win on April 20, 2012 at 16:33
ဒီ post မှာ ရေးထားသလိုဘဲ ကျွန်မလဲ တခုခုဆို ဘာသာအရင်ပြန်တတ်တယ်...အဲဒါက နည်းလမ်းမမှန်ဘူးဆိုတာလဲ သိထားတယ်..ဒါပေမဲ့ အဲဒီအကျင့်ကို ဘယ်လိုဖျောက်ရမှန်းမသိဘူး ဖြစ်နေတယ်..နည်းရှိရင်ပြောပေးပါဥိး..ကျေးဇူးပါ....
Permalink Reply by Mg Thet Aung on June 24, 2012 at 15:37
ရေးထားတာ ကောင်းပါတယ် အခုလိုမျိူးအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်း ထပ်တင်ပေးပါဦး
Permalink Reply by AshinDamahar Nanda on June 16, 2015 at 5:26